Wilfried Zaha oo sheegay inuu doonayo inuu ka ciyaaro Champions League – Gool FM
(London) 20 Abriil 2019. Ciyaaryahanka kooxda Crystal Palace ee Zaha ayaa sheegay inuu doonayo inuu ka ciyaaro koobka horyaallada Yurub ee Champions League.
Xiddiga naadiga Crystal Palace ee Wilfried Zaha waxa uu daboolka ka horay inuu aad u doonayo inuu ka ciyaaro Champions League mustaqbalka, taasoo ka dhigan inuu rabo inuu ka tago kooxdiisa reer London.
Zaha ayaa la la xiriirinayay inuu ka dhaqaaqi doono kooxda Palace kaddib markii uu qaab ciyaareedkiisa saxda ah ku soo laabtay kaddib markii uu ka tagay Manchester United sanadkii 2013-kii ka hor inta uusan si rasmi ah ula wareegin Palace 2015-kii.
Hadda waxa uu Wilfried Zaha shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu ka ciyaaro Champions League taasoo ka dhigaysa inuu ka tagi doono kooxdiisa Palace si uu ugu biiro koox ka qeyb galaysa Champions League.
Lama shaacin kooxda uu rabo inuu ku biiro Zaha si uu uga dheelo Champions League, laakiin waxaa la filayaa inuu ka tagi doono kooxdiisa si uu uga ciyaaro Koobka horyaallada Yurub oo uu riyadiisa u rumeeyo.
26-sano jirkaan ayaa siddeed gool u dhaliyey kooxdiisa Crystal Palace xilli ciyaareedkan.